Bakhala 'ngokuqhwagwa' izingane ngosomatekisi - Ilanga News
Home Izindaba Bakhala ‘ngokuqhwagwa’ izingane ngosomatekisi
Bakhala ‘ngokuqhwagwa’ izingane ngosomatekisi
Kuthiwa bahlawulisa umphakathi kuya ku-R5000 uma kunabantu ezimotweni
SESIQUBULE umsindo isenzo ‘somalume’ okusolwa ukuthi bangaphansi kwenhlangano yamatekisi iSouth African National Taxi Council (Santaco), eLamontville naseMlazi, eThekwini abasolwa ngobuqhwaga, ikakhulukazi abathutha izingane zesikole. Kuthiwa bahlukumeza abantu bezimoto ezincane abasuke belayishe izingane zabo, izihlobo noma omakhelwane, baphoqwe ukuba bahlawule ngemali ephakathi kuka-R1 000 kuya ku-R5 000 Leli qeqebana ‘lomalume’ kuthiwa limisa izimoto lehlise izingane ezimotweni ezincane uma zingaphezu wezimbili.
Esinye isakhamuzi saseLamontville esicele ILANGA ligodle igama laso ngenxa yokwesaba, sithi indodakazi aso igcine ingayanga emsebenzini ngenxa yokuhlukumezeka muva nje. Sithi indodakazi nebihamba nabo, baphoqiwe ukuyokhipha imali yokuhlawula ukuthi bahamba bawumshungu emotweni, kufanele ngabe bagibela amatekisi ngoba bona bayawukhokhela umzila. LANGA lithole ukuthi labo somatekisi bama ngasenxanxatheleni yezitolo, eMlazi Mega City. UNkz Ayanda Melansi ongumzali, uthi ubhekane nale nkinga, izingane zakhe zehliswa emotweni kamngani wakhe obemsiza kwazise izingane zabo zifunda esikoleni esisodwa.
Uthi uzithola esengena kule nkinga nje, umngani wakhe akamkhokhisi imali kwazise naye usuke ehambisa ezakhe. “Phambilini izingane zami bezigibela i-uber ngoba ngifuna ukuba ziphume ekhaya ziye esikoleni. Kuhambe isikhathi zavinjwa, umshayeli owayezihambisa wahlawuliswa. “Ngibahloniphile ngayeka ukuzigibelisa i-uber, ngakhuluma nomngani wami. Namuhla ekuseni zithe zigibela nje emotweni, baqhamuka sebebuza ukuthi zikhokha malini kule moto. “Bathe akuvumelekile ukuthi athathe izingane. Sibachazelile ukuthi kazikhokhi emotweni ngoba zisuke ziya esikoleni esisodwa, kodwa bangakuzwa lokho,” kusho yena.
Omunye umzali ocele ukungadalulwa uthi bagcine bephoqelekile kuthi bahlanganise imali u-R2 000 ukuze imoto ehambisa ingane yakhe ingavinjwa endleleni. Kulo nyaka ingane yami ibiyoqala esikoleni samabanga aphezulu, ngenxa yokuthi ibizofunda eMlazi, ngibheke omalume ngasekhaya ngangabathola ngenxa yokuthi isibalo sezingane ezifunda kule ndawo okufunda kuyona eyami, zincane. “Enye inkinga besibhekana nayo, wukuthi besitshelwa ukuthi ngoba izingane zethu zifunda esikoleni samabanga aphansi, kuzomele zizigibelele okuyinto engaphephile. Sihlanganile nabazali, sacela omunye umfana ukuba asithathele izingane zethu.
“Kuhambe isikhathi bamvimba ngoba bethi akavumelekile ukuthatha izingane. “Kwale ngisho esechaza ukuthi ucelwe ngabazali. Bamtshele ukuthi bazoyithatha imoto, ayikhiphe ngo-R5 000. “Ugcine encenga bamehlisela ukuba akhokhe u-R2 000 ukuze ezoqhubeka nokuhambisa izingane, sigcine sihlanganisa singabazali sayikhipha leyo mali. “Le nto iyinkinga ngoba isho ukuthi kumele sikhethelwe yibona ukuthi ingane ihambe ngani uma iya esikoleni,” kusho yena. Okhulumela iSantaco KwaZulu-Natal, uMnu Mduduzi Makhunga, uthi akuvumekile ukuba kuvinjwe umzali osuke ehambisa izingane zakhe ngemoto yakhe esuka nazo kwakhe, ngisho ngabe zingaki.
“Kuyiphutha ukuvimba umuntu osuke ehambisa izingane zakhe esikoleni. “Inkinga iqala uma umzali esezothatha nezingane zakwamakhelwane, lokho kusho ukuthi usephazamisa umsebenzi womalume okuyibona abagunyazwe ukuthatha izingane. “Uma umzali efuna ukuthatha nezingane zakwamakhelwane, kumele alandele imigudu efanele aye nakusoseshini osebenza lapho ehlala khona, asho ukuthi usefuna ukuthatha izingane. “Lowo soseshini uyobe usumsiza ukulandela imigudu ehlanganisa inkontileka phakathi komzali ncwadi eqhamuka esikoleni eqinisekisa ukuthi uthatha leyo ngane, bese eya kusoseshini umgcwalisise amafomu ngaphambi kokuba abe nemvume yokuthatha izingane,” kusho yena. Ucele kubazali ukuba bangathathi izingane okusuke kungezona ezabo baziyise esikoleni ngoba lokho kuphazamisa umsebenzi womalume. Ebuzwa ukuthi ngabe kukuphi lapho uMthesisekelo waseNingizimu Afrika uthi abanikazibamatekisi mabavimbe abantu bezimoto ezincane noma kumele babike kososeshini uma belekelela omakhelwane ngezingane.
Previous articleAmadoda anesithembu athi kuhlale kuyiValentine kuwona
Next article13 February 2022